Ragga ugu quruxda badan adduunka, waa kuwama kuwa nasiibka badan? | Ragga Stylish
Iyada oo ay sii kordheyso tirada dadka adduunka ku nool iyo in ka badan 7 bilyan iyo badh dadka deggan, way adag tahay in la doorto kan ama kaas ragga adduunka ugu quruxda badan. Waxaa jira malaayiin iyo malaayiin musharrixiin ah, laakiin waxaa jira qaar yar oo runtii u qalma. Waxaa jira aalado kala duwan oo loo isticmaalo in lagu doorto ragga adduunka ugu quruxda badan, quruxdu waa astaamo shakhsiyeed.
Haddii aad rabto inaad la kulanto ragga ugu quruxda badan adduunka, qoraalkan waxaad ka heli kartaa dhammaantood. Kaliya waa inaad sii wadataa akhriska.
1 Qaabka doorashada
2 Liiska ragga adduunka ugu quruxda badan
3.1 Nuux miinshaaro
Marka ugu horeysa waa inaad ogaataa qaababka aan ka soo xusho quruxda iyo qaabka. Maaddaama quruxdu ay tahay astaamo shakhsiyadeed, waa inaan ogaanno sida loo doorto ragga ugu qurxoon. Mid ka mid ah aaladaha ay bulshadu aad u isticmaasho waa caan. Waxay kuxirantahay sida caanka ah ee nin u noqdo, xirfad kastoo uu leeyahay, wuxuu bilaabayaa inuu kasoo muuqdo qiimeynta ragga adduunka ugu qurxoon.
Sida aad u aragto, qalabkani waa mid shakhsiyan ah oo u adeegi maayo inuu bartilmaameedsado ragga dhabta ah ee qurxoon. Sayniska, dhanka kale, wuxuu adeegsadaa xukunka isku dhaca wajiga iyo saamiga dahabiga ah. Sida laga soo xigtay saynisyahannada, qaabka ugu fiican ee dabiiciga ah Waa midka la mid ah saamiga dahabiga ah. Inta badan ninka wejigiisa wuxuu la egyahay saamiga dahabiga, kolba sida uu u qurux badan yahay ayuu cilmi ahaan u hadlayaa.
Waxaan si fiican u ognahay in quruxda ay tahay mid shakhsiyan ah iyo in, halka qof ka mid ah laga yaabo inuu helo qof kale oo qurux badan, qof kalena laga yaabo inuusan helin. Qofku wuxuu u noqon karaa qurux iyo fool xumo isla markaa laba qof oo kala duwan. Dabcan, guud ahaan, heerarka quruxda ee ay dejisay bulshadu waxay "naga caawinayaan" in aan qabanno nooc ka mid ah "shaandhee" si loo xusho ragga ugu qurxoon.
Liiska ragga adduunka ugu quruxda badan
Waxaan xoogga saareynaa in heerarka quruxda aysan aheyn inay raacaan xarriiq go'an. Wejiyadda ragga ee aan hoos ku tusi doonno ayaa laga yaabaa inay kaaga qurux badan yihiin ama kaaga foolxun yihiin su'aasha la weydiinayo, laakiin waxay u hoggaansamayaan mid ka mid ah sharciyada kor lagu aasaasay ama kaliya haysashada "wax" taas oo ka dhigaysa waxa ugu xiisaha badan. Waxay sifiican u noqon kartaa shakhsiyaddaada soo jiidashada leh, muuqaalkaaga qarsoodiga ah, dhoolacadeynta qurxan, qaabka labiska, iwm.
Waana inay raggaasi awoodaan inay soo jiitaan qof walba, quruxdooda ama kartidooda awgood. Ragga soo socda ayaa caan ku ah filimada, muusikada, ama moodada. Waxaan xusuusan nahay in deriskaaga laga yaabo inuu ka qurux badan yahay midkood, laakiin lama oga inuu ku habboon yahay dusha sare.
Aynu liistada ku bilowno ninkan jilaa u shaqeeya oo bilaabay inuu caan ku noqdo faragelintiisa taxanaha ah sida Ciyaarta carshiga iyo Narcos. Waad ku mahadsan tahay muuqaalkeeda shaashadda ee taxanaha dhamaadka sare, waxay noqotay soo jiidasho goobta.
Waa wax ku saabsan 50 Shades of Grey actor. Laakiin isagu caan kuma noqon oo keliya tan, wuxuu hore u ahaa moodel oo wuxuu qabaa Amelia Warner. Ninkani ma joojinayo inuu ku sii kordho adduunka taageerayaal badan.
Isagu waa jilaa kale oo ka mid ah ragga adduunka ugu quruxda badan. Ka qayb qaatay filimka Buur Mountain between Us taas oo muuqaalada ay kaga badbaadeen barafka ay ahaayeen kuwo caan ah. Jilaagan wuxuu kamid ahaa raga ugu kacsiga iyo hamiga badan sanado badan. In kasta oo uu durba 45 jir yahay, haddana waa nin aad u gabooba.
Waxay ku saabsan tahay jilaaga xiddig ee Dibedda Waa nin si adag u tababbara si uu jidhkiisu u yeesho murqo. Jidhkiisa wanaagsan awgood, wuxuu kaloo sameeyaa muuqaalo fara badan oo uu qaawan yahay. Isaga kaliya ma qurux badna wajiga, laakiin sidoo kale jir ahaan.
Haatan waa 37 jir inkasta oo uu haysto taxane caan ah iyo filimaan badan, haddana wuxuu bilaabay in loo tixgeliyo inuu yahay mid ka mid ah jilayaasha ugu soo jiidashada badan hadda.
Maluma waxay caan ka noqotay dunida Latinka iyo inta kale. Iyadoo mowduuca "Happy the 4" ayaa noqday qof aad caan u ah kuna faafay adduunka oo dhan. Xirfadiisa ayaa gaartay meeshii ugu sareysay waxaana hada loo aqoonsaday inuu yahay xiddig caalami ah.
Bilowgiisii ​​hore ee 2010 waxaa lagu arkaayey timo kor loo qaaday oo la xiiray. Si kastaba ha noqotee, wuxuu haatan ciyaaraa gadhka taasna waxay si weyn u xoojisay qaabkiisa.
In kasta oo magaca aan si fiican loo aqoon, haddana hubaal markaad aragto sawirka waxaad garan doontaa inuu aad u qurux badan yahay. Waxaa loo yaqaanay natiijada Baabuurta 3 iyo Ninka Ka yimid Adeer. Si kastaba ha noqotee, runtii lama aqoonin illaa filimkii la yiraahdo iigu wac magacaaga.
Weligaa ma isweydiisay sababta dumarka loogu soo jiito "ragga xun"? Tani waa tusaale ahaan. Joe wuxuu matalaa astaamaha Jesse ee Taxanaha Waxyaabaha shisheeye ee Netflix. Doorkeedu waa mid aad u neceb oo aan loo dulqaadan karin, laakiin waxay ilaalisaa qiiq joogto ah oo soo jiita kooxda haweenka ah ee taageerayaasha taxanaha.
Si kastaba ha noqotee, nolosha dhabta ah waa wiil fudud oo kooxda filimka waxay ku leeyihiin isaga sida ugu qosolka badan.
Ninkan waxaa loo arkaa mid ka mid ah ragga ugu quruxda badan adduunka, xitaa ka hor inta uusan bilaabin xirfadiisa jilitaanka. Intaas ka hor wuxuu ahaa nin lagu daydo oo lala xiriiriyo shirkado badan oo moodada sameeya. Ka dib markii ay bilaabeen inay gaadhaan magaceeda moodel ahaan waxay qandaraas la gashay Dolce iyo Gabbana sanadkii 2005 waana ku mahadsan tahay tan, xitaa waxay noqotay mid la sii yaqaan.
Waxaa la arkaa isagoo ka qeyb galaya filimka "Jinsiga iyo Magaalada" halkaasna waxaa laga arki karaa isagoo ka qeyb qaadanaya silsilado iyo filimyo kale.
Waxaan rajeynayaa inaad ku raacsan tahay xulkan yar ee ragga adduunka ugu quruxda badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » dhaqanka » Ragga ugu quruxda badan adduunka